आमा कै कोखबाट राजनीति सिकिसकेका हुन्छन् « News of Nepal
आमा कै कोखबाट राजनीति सिकिसकेका हुन्छन्
इन्दिरा शर्मा काफ्ले
धेरैले भन्छन मलाई राजनिति मनपर्दैन ,राजनिति भनेको एउटा फोहाेरी खेल हो भनेर अहिले भन्ने हो भने नेपालिहरुले आमा कै कोखबाट राजनिति सिकिसकेका हुन्छन् । हरेक क्षेत्र मा राजनिति घुसिसकेको छ । मुलुकको आर्थिक स्थिति लाइ हेर्ने हो भने देश दिनप्रति दिन ओरालो तर्फ लाग्दैछ पाइलै पिछे भुखमरी नेताहरु को मुखमा गुर्जो कोच्याए झै पैसा को बिटो नकोच्याइ कामै बन्दैन रात पछि दिन आउछ तर राजनिति ले न रात भन्यो न दिन हरेक क्षण तछाड र मछाड्को राजनिति गरिन्छ।
सोर्स बिना तँ कामै पो हुदैन तँ ?
रोजगार को लागी की तँ घर छोडेर लाहुर नै पस्नु पर्यो की तँ नेता को चाकडी नै गर्नै पर्यो नेता को चाकडी गरेउ तँ जागिर पायौ नत्र भने सर्टिपिकेट नच्यातिउन्जेल भौतारिएर हिँड्नु पर्छ योग्यताको आधारमा जागिर पाउन तँ परै जावोस। ठूलो पदमा जागिर खान तँ मन्त्री प्रधानमन्त्री को कोखबाट पो जन्म लिनुपर्छ ।
एउटा सानो भन्दा सानो काम गर्न पनि मन्त्रीको आदेश, नेताको आदेश ,मेहरको आदेश भनेर सेवाग्राही लाइ निराशा बनाइन्छ ।
देशमा नेताको गुलामी नगरी मुखमा माड पनि नलाग्ने अवस्था पो आयो । देशका राजनितिज्ञ भनाउदाहरुले न देश बनाए न त जनता नै बस आफू र आफ्ना नाता गोता मात्र बनाए ।
यदी देश बदल्नु छ भने पहिला आफ्नु सोचलाइ बदल्नु पर्छ कुर्सी बदल्दैमा देश बदलिदैन नेता आफू तँ बने तर देश कहिले बनेन । भ्रष्टचारी को अनुहार दिनदिनै फेरियो तर देशले काचुलि फेर्न गारो भयो । भ्रष्टाचारीहरु देश लुट्नमै लिप्त रहे देशले नया चेहरा हेर्न तँ आकाशको फल आँखा तरी मर भने जस्तो पो भो । देशमा स्वच्छ छवी भएका नेता हरु नै देख्नै मुश्किल परिसक्यो ।
देशको जिम्मेवारी पद वहन गर्न नसक्ने नेता हरुले गर्दा आज देश र जनता हरु निराश देखिदैछन। यी ठुला दलहरु लुट्तन्त्र उपर मौन रहे,जनताले आशा गरेकोे विकाश र समृदिको उच्च आकांक्षा ,जनताको कठोर त्याग्,बलिदानलाइ यी दलहरुले लत्याइदिए जनता को कुरा नसुन्ने भ्रष्टाचारी लाइ उन्मुक्ति दिने बलात्कारिलाइ फरार गर्नै नीति नै बनिसक्यो ।
शिक्षा,स्वास्थ,सार्वजनिक यातायात ,सामाजिक सुरक्षा जस्ता सुविधाहरु जनताले भन्दा नेताहरु नै लाजै नमानि उपयोग गर्न थाले ।
राजनितिलाइ व्यबस्थित तरिकाले निती र नियममा ढाल्न सकिदैन ,संविधान अनुरुप चल्न सकिदैन भने राजनिती नगर्दा नै बेश
हो म पनि राजनिती गर्छु तर तपाइ जस्तो होइन । म पेशाले सेवा नै गर्छु ,तर म राजनिती गर्छु ,राजनिती लाइ सेवा बनाउछु म देश र जनता को सेवा गर्छु त्यसैले अब म राजनिती नै गर्छु ।
देशमा भ्रष्टचार गर्नै गाउका सोझासाझा जनताहरुलाइ लाठी बर्साउने होइन उनीहरू संग काधमा काध मिलाएर समान ब्यवहार गरेर हिँड्ने राजनिति गर्छु । पद्दती ले चल्यो भने देश पनि बन्छ र आफु पनि बनिन्छ । यी ठुला दलहरुको मनोबल बढ्दै गयो देश मा मैले जे गरेँ नि हुन्छ भनेर संविधानलाइ लत्याउदै ,तोड्मोड गर्दै हिड्न थाले। कुर्सिको लोभमा मन लागे समर्थन गर्नै ,मन नलागे समर्थन तोड्ने जस्ता खेल खेल्नेले गर्दा
३ करोड जनताहरु प्रति ठेश पुर्याउने काम भैरहरेको छ । अब देशले युवा, देशप्रेमी, निडर ,निस्वार्थ, देशभक्क्ति र निष्ठावान ,जनताको जनआकांक्षा अनुरुप देश चलाउन सक्ने वैकल्पिक पाटी को आशा गरेकोे छ त्यो हो विबेकशिल साझा पार्टी जय देश नेपालको जय होस !!!
(लेखक स् काफ्ले विबेकशिल साझा पार्टी की केन्दिय सदस्य हुनुहुन्छ । )